अय्यूब7ERV-NE;NIV - अय्यूबले भने, - Bible Gateway
अय्यूब7Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
7 अय्यूबले भने,
“मानिसले पृथ्वीमा कठोर सङ्घर्ष गर्छ।
उसको जीवन एक ज्यालामा काम गर्नेहरूको जस्तो छ।
2 मानिस एक दास जस्तो हो जसले गर्मीको दिनमा कठोर काम गरेपछि चिसो छाँया खोज्छ।
मानिस एक ज्यालाको कर्मी जस्तो हो जसले ज्याला पर्खिरहन्छ।
3 त्यसरी नै मैले महिनौंसम्म अर्थहीन यातनाहरू भोगेको थिएँ
अनि मेरो लागि कष्टका रातहरू अलग राखिएका छन्।
4 जब म सुतें, मैले सोचें,
‘कतिन्जेल मैले सोच्ने, जबसम्म म उठ्दिनँ?’
तर रात लामो छ।
अनि घाम नझुल्कुन्जेलसम्म म ओछ्यनमा छट्पटाउँदै रहें।
5 मेरो शरीर किराहरू र फोहरले ढाकिएको छ।
मेरो छाला निको हुन थाल्छ अनि त्यसपछि फेरि एकपल्ट नयाँ घाउहरूले छोपिन्छ।
6 “मेरो दिनहरू जुलाहा तानको धागो झैं चाँढो-चाँढो वितिरहेको छ
अनि प्रत्येक दिन निराशमय भई शेष हुन्छ।
7 परमेश्वर, सम्झनुहोस् मेरो जीवन त ढुकढुकी मात्र हो।
म कहिल्यै पनि फेरि केही राम्रो देख्ने छैन।
8 अनि तपाईंले मलाई फेरि देख्नु हुने छैन,
तपाईंले मलाई हेर्नु हुनेछ, तर म गई सकेको हुनेछु।
9 बादल विलिन भएर गए जस्तै मानिस मर्छ
अनि चिहानभित्र गाडिन्छ अनि ऊ फेरि फर्की आउँदैन।
10 ऊ आफ्नो पुरानो घरमा फेरि फर्की आउँदैन
उसको घरले फेरि उसलाई चिन्ने छैन।
11 “यसैले म चुपचाप रहने छैन।
म बोल्नेछु। मेरो आत्माले कष्ट पाएको छ।
म गुनासो गर्नेछु किनभने मेरो आत्मा दुःखमा छ।
12 के म समुद्र हुँ अथवा समुद्री-जन्तु हुँ?
परमेश्वर, किन मेरो हेरचाह गर्नु हुन्छ?
13 मेरो ओछ्यानले मलाई आराम दिनु पर्छ,
मेरो ओछ्यानले मलाई विश्राम र शान्ति दिनुपर्छ।
14 तर परमेश्वर जब म ढल्किन्छु
सपनाहरूमा तपाईंले तर्साउनु हुन्छ, दर्शनहरूले भयभीत पार्नु हुन्छ।
15 यसर्थ म यसरी बाँचिरहनु भन्दा
गला अँठ्‌याएर मर्न चाहन्छु।
16 म आफ्नो जीवनलाई घृणा गर्छु।
म चीरकालसम्म बाँच्न चाहन्न।
मलाई एक्लै छाडी दिनुहोस्
मेरो जीवनको अर्थ नै छैन।
17 परमेश्वर, तपाईंको निम्ति मानिस किन अत्यन्त मुख्य छ?
किन तपाईंले उसको सम्मान गर्नुपर्छ?
किन तपाईंले उसको हेरचाह गर्नुपर्छ?
18 किन प्रत्येक बिहान तपाईंले मानिसको प्रतिक्षा गर्नुहुन्छ?
अनि प्रत्येक क्षण परीक्षा लिनुहुन्छ?
19 परमेश्वर, तपाईं मबाट कहिल्यै टाढा रहन सक्नुहुन्न।
तपाईंले मलाई एकछिन पनि एक्लै छाडन सक्नुहुन्न।
20 परमेश्वर तपाईंले मानिसहरूमाथि नजर राख्नुहुन्छ।
यदि मैले पाप गरेको छु भने, सजाय दिनुहोस्, मैले के गर्नु पर्छ?
किन तपाईंले मलाई निशाना बनाई प्रयोग गर्नु भयो?
के म तपाईंको निम्ति एक समस्या भएको थिएँर?
21 किन तपाईंले मेरो अपराध क्षमा गर्नु भएन?
किन तपाईंले मेरा निम्ति पापहरूको क्षमागर्नु भएन?
चाँडै म मर्ने छु र आफ्नो चिहानमा हुनेछु।
तब तपाईंले मलाई खोज्नु हुनेछ
तर म गइसकेको हुनेछु।”